DEG DEG+Akhriso:-Jadwalka Doorashada Jubbaland Oo Isbedel Lagu Sameeyay -News and information about Somalia
Home News DEG DEG+Akhriso:-Jadwalka Doorashada Jubbaland Oo Isbedel Lagu Sameeyay
Guddiga doorashooyinka maamulka Jubbaland ayaa maanta isbedel ku sameeyay Jadwalkii doorashada ee ay hor u soo saareen kaas oo tilmaamay waqtiga doorashada Guddoonka baarlamaanka iyo Madaxweynaha.
Qoraal ka soo baxay guddiga doorashada ee maamulka Jubbaland ayaa lagu sheegay in inwax laga bedelay Jadwalka isla markaaana diiwaangelinta musharaxiinta guddoonka baarlamaanku ay bilaabanayso manta oo ay taariikhdu tahay 14- Agoosto.
Dhinaca kalana waxa hadal jeedinta musharaxiinta guddoonka baarlamaanka laga dhigay 15-Agosto doorashada guddoonka 17-Agosto halka hadal jeedinta musharaxiinta madaxweynaha ay bilaabanayso 18-Agosto ugu dambeyna doorashada madaxweynaha ay dhaceyso 19-bishaa.
Lama oga sababta ka dambeysa in isbedel lagu sameeyo Jadwalka doorashada hase’ahatee waxaa maalmahaan jira walaac la xiriira hanaanka guddiga doorashooyinku ay u maamulayaan arrimaha doorashada waxaana eeddaas ka imaanaysay musharaxiinta.
Halkaan Ka Akhgriso
Previous articleAWDHEEGLE: Al-shabaab oo sheegatay inay Askar badan ku laayeen Qaraxyo Is-miidaamin ah & Wararkii ugu dambeeyay
Next articleSAWIRRO: Wasiir Sabriye iyo Sheekh Shaakir oo la kulmay Guddiga Qaban qaabada Shirka Dib u heshiisiinta Galmudug